10ka cuntada ee Thermomix Christmas-ka ugu fiican ee sameeya ciidahan | Xeerarka ThermoRecipes
10ka cuntada ee ugu fiican Thermomix Christmas si loo sameeyo ciidahan
Irene Arcas | | Navidad, Cunnooyinka Thermomix
Kirismaska ​​ayaa soo dhowaanaya waxaanna ka wada fikiraynaa liiska cuntada ee Kirismaska ​​ee aan sanadkan diyaarin doonno. Qaar badan oo idinka mid ah ayaa na weydiinaya cuntooyin dhaqameed badan iyo kuwo kale oo cusub. Marka, waxaan ku qornay qodobkan 10ka ugu sareeya ee cuntooyinka kirismaska ​​ee ugu guusha badan barta internetka.
Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay iyaga! Laakiin waxa aan hubno waa inay ku siin doonaan fikrad wanaagsan oo aad kaga yaabiso oo aad uga farxiso xubnaha qoyskaaga.
SXB MERRY KRISMAAS WAAD KU MAHADSAN TAHAY IN AAD SII SOO ​​KORDHISAY NAGU SANNADKII DHEERAADAY !!
2 Diiwaanka Kirismaska
4 Nuugista doofaarka laba boogo
5 Cannelloni leh hilib iyo pate
7 Maraq cunto ah
8 Salad Kirismas ah oo leh ruush
9 Dhabannada Bourguignon
10 Dufanka keydka ee Polvorones
Kirismas kasta waxay noqoneysaa dhaqan ka caado ah in la helo shukulaato kulul oo wanaagsan si loo bilaabo maalinta koowaad ee sanadka. Ku weheliso taajir roscón de Reyes, a panettone ama qaar churros waxayna noqon doontaa wax la soo bandhigo.
Cunto aad u asal ah uguna quruxda badan oo loogu talagalay dabaaldegyada Kirismaska. Waxay qurxin doontaa miisaskaaga, Waxay noqon doontaa boqorka macmacaanka oo kuwa yaryarna way jeclaan doonaan ku raaxayso macaankan macaan. Qurux macaan laga sameeyay.
Iyada oo dhadhanka iyo daryeelka dhammaan waxyaabaha lagu sameeyo guriga. Cunto qaadasho dheer laakiin fudud oo leh natiijo wanaagsan. Waxaad ku dhici doontaa jacayl macaankan dhaqameed ee kirismaska, dhadhankiisa iyo muuqaalkiisa.
Nuugista doofaarka laba boogo
Cunto karis yaab leh ku farxi martidayada saxan dhaqameed laakiin aad u fudud. Waxaan ka faa'iideysan doonnaa fursadda aan ku sameyn karno laba jibbaar: marka hore waxaan ku karineynaa bac wax lagu dubay ka dibna, waxaan ku dhammeyn doonnaa fartiin macaan oo ku jirta foornada. Cunto karis fiican oo aad horay u sii diyaarin karto.
Cannelloni leh hilib iyo pate
Cunto ka mid ah cuntooyinka Kirismaska, waa wax lagu farxo. Hilibkan iyo pâté cannelloni lama khaldami karo. Si dhakhso leh oo fudud, oo leh dhadhan cajiib ahHaddii aadan rabin inaad naftaada ku adkaato faahfaahin ballaaran ee kushiinka, shaki la'aan, tani waa saxankaaga.
Cuntadan loogu talagalay hake in cava waa saxan dhadhan fiican leh, oo ku habboon fasax sida Maalinta Kirismaska ​​ama xaflad kale ama fiid gaar ah oo lala yeesho martida. Waa a fudud oo si fudud loo sameeyo saxanSi kastaba ha noqotee, dhadhankeeda gaarka ah ee cava-ga ayaa ka dhigaya mid ku habboon inuu u rogo saxan aad u gaar ah.
Maraq cunto ah
Bilowga caadiga ah ee Kirismaska, macaan oo aad u dhadhan fiican leh. Si aad afkaaga uga bilowdo suxuunta suxuunta leh ee aan hadhow ku dhejin doonno liiskayaga masiixiga, Maraqan cuntada baddu waa guul. Ka buuxa dhadhan, nuances iyo qaabab kala duwan, waa 10 saxan.
Salad Kirismas ah oo leh ruush
Cunto karis cajiib ah oo loo soo bandhigo sidii bilow. Waxaan siin doonnaa taabasho gaar ah oo gaar ah saladan Ruushka ah ee ay weheliso cowska iyo qaar ka mid ah cawl cas oo siin doona taabasho gaar ah oo lagu kala sooco Cunto fudud, oo aan horay u sii diyaarin karno taasna, shaki la’aan, waxay noqon doontaa guul la hubo.
Haddii aad rabto inaad ku guuleysato Kirismaskaan, dhabannadan bourguignon waxay kuu fududeynayaan adiga. Iyagoo ah kuwo cajiib ah, iyagu waa fudud yihiin inay kaa yaabi doonaan. Cunto hilib ah oo aad ugu adeegi kartid sida ugu muhiimsan Kirismaskan oo aan cidna uga tagi doonin danayn la'aan.
Dufanka keydka ee Polvorones
Miyaad hadhay polvorones-ka Kirismaska? U diyaari keeggan la yaabka leh si aad uga faa'iideysato macmacaanka Kirismaska. Waad arki doontaa waxa ay qurxoon oo jilicsan jilicsan oo ay leedahay. Waana ku habboon tahay in lagu qaato shaah ama qaxwo quraac ama cunto fudud.
Soo ogow cuntooyinka kale: Navidad, Cunnooyinka Thermomix
Wadada buuxda ee maqaalka: Heerkulbeegyada » Maqaallo » Cunto gaar ah » Navidad » 10ka cuntada ee ugu fiican Thermomix Christmas si loo sameeyo ciidahan
9 macmacaan deg deg ah maanta (Ciida Kirismaska)
10 cunto karinta hilibka loogu talagalay dabaaldegyada kirismaska